पढ्नु होस् सहबासबारे १० भ्रम – Waikhari
गृहपृष्ठ जीवन शैली पढ्नु होस् सहबासबारे १० भ्रम
पढ्नु होस् सहबासबारे १० भ्रम
सेक्स अर्थात यौन जीवनको श्रोत नै हो भन्दा अत्तिसयुक्ती हुँदैन । किन भने सबै प्राणीको जन्म यो वा त्यो तरिकाले यौन सम्बन्धकै कारण हुन्छ । तर यहि सेक्स हाम्रो समाजमा यति क्लिष्ट विषय बनेको छ कि सेक्सका विषयमा ब्याप्त गलत अवधारणाका कारण मानिसहरुले यौन जीवनको आनन्द लिन सकिरहेका हुँदैनन् । यहाँ समाजमा ब्याप्त सेक्सबारेका गलत मिथकको चर्चा गरिएको छ जसलाई तोड्न सके यौन जीवन सहज हुनसक्छ । सेक्सका विषयमा विभिन्न मिथकहरु छन् । सेक्सलाई अध्यात्मिक जीवनहुँदै परमात्मासँग जोड्ने देखि केवल बेडरुमको मस्तिमा सीमित गर्नेहरुको कमि छैन ।
१. के सँधै यौनिक क्रियाकलाप सधै पुरुषले शुरु गर्नु पर्छ, महिलाले ग्रहण मात्र गर्ने हो ?
सामान्यतया कुनै पनि स्त्रीसँगको सहवासमा पुरुषले नै यौनिक क्रियाकलाप शुरु गर्नु पर्ने ठानिन्छ । तर वास्तवमा पुरुषहरु सँधै आफूले नै शुरु गर्नु पर्छ भन्ने ठान्दैनन् बरु त्यस्तो गर्दा गर्दा वाक्क भैसकेका हुन सक्छन् । अझ सधै यस्तो नै रह्यो भने सेक्स एउटा भारी जस्तो बन्न पुग्छ ।
कुनै पनि स्त्रीले आफूसँग रोमन्टिक बनेको र यौनका लागि प्रोत्साहित गरेको पुरुषहरुलाई मन पर्छ । त्यसकारण यौन जीवन जिवन्त राख्न महिलाहरुले आफूलाई इच्छा लागेको समयमा खुल्लारुपमा यौनिक क्रियाकलापमा सक्रिय हुनु पर्छ ताकि पुरुषलाई अनुभव भैरहेको दिक्कपना हटोस् । स्वस्थ यौन जीवनमा जहिले पनि महिला र पुरुषले यौन तृप्तीका लागि आवश्यक एकअर्काका चाहाना र इच्छा खुलारुपमा एक अर्कासँग बाँढ्नु पर्छ ।
२. सेक्समा सक्रियता नै यौनिकताको राज
हामी सबै यौनिक छौं । हामीसँग सेक्स पार्टनर भएपनि नभएपनि जीवनभर हाम्रो यौनिकता कायम रहन्छ । हामीसँग यौनिक कल्पना र इच्छाहरु पनि हुन्छन् यद्यपी ति सबैकुराको प्रत्यक्ष अनुभव हामी हाम्रो जीवनमा नगरेका पनि हुन सक्छौं । कतिपय मानिस आफ्नो यौनिकता लुकाउन खोज्दा सारै कुण्ठित भैरहेका हुन्छन् । स्वस्थ सेक्स जीवनका लागि तपाइँले आफ्नो यौनिकतालाई स्वीकार गर्नु र आफ्नो यौन जीवनबारे एउटा धारणा बनाउनु नै उत्तम हुन्छ । सकेसम्म सेक्सी बन्नुस् सेक्सी देखिने कपडा लगाउनुस् । प्रत्येक ब्यक्तित्व सेक्सी र यौनिक हुन्छ । त्यसलाई अभिब्यक्त गर्न मात्र जान्नु पर्छ ।
३. के सेक्स शारीरिक कुरा मात्र हो ?
हामी मध्ये अधिकाँशलाई लाग्छ यौन शारीरिक विषय हो । तर यो पनि एउटा यस्तो मिथक हो जसको पहेली बुझ्न सके यौन जीवनलाई थप आनन्ददायक बनाउन सकिन्छ । कतिपय मान्छेहरु बक्षस्थलको आकार, लिङ्गको लम्बाइ, योनीको गहिराइ वा समग्र शरीरको ढाँचासँग यौनलाई जोडछन् । तर वास्ताविकता के हो भने जुन जोडीले यौन सम्बन्धलाई शारीरिकता भन्दा माथि पु¥याउन सक्छन् उनीहरुले मात्र यौनको आनन्दलाई सजिव राख्न सक्छन् । किन भने यौनिक क्रियाकलापमा पनि तपाइँको भावना वा विचार प्रदान हुन्छ ।
यौन सम्बन्ध कस्तो मानसिक अवस्थामा गर्नु भएको छ वा के सोँचिरहनु भएको छ भन्ने कुराले यौन आनन्दको स्तर निर्धारण गर्छ । तपाइँले सेक्स पार्टनरप्रति प्रेमको अनुभव गर्नु हुन्छ भने तपाइँको आनन्द शारीरिकतामा निर्भर गर्दैन । तपाइँको भावनाले यौन अनन्दमा प्रभाव पारेको हुन्छ । अर्थात सेक्स शारीरिक विषय मात्र होइन यो मानसिक र शारीरिक दुवै कुराको मिश्रण हो ।
४. सुन्दरता र सेक्स
अधिकाँश मानिस शारीरिक सुन्दरताले सेक्सको इच्छा जगाउने बताउँछन् । तर कसलाई को र के सुन्दर लाग्ने भन्ने कुरा नितान्त ब्यक्तिगत कुरा हो अर्थात ब्यक्तिपिच्छे यो फरक हुन्छ ।सन्तुष्टीदायक यौन सम्बन्धसँग शारीरिक सुन्दरताको खासै साइनो छैन । स्त्रीका बक्षस्थलको आकार वा पुरुषसका पाखुराले मात्र यौन सन्तुष्टी दिने सामथ्र्य राख्दैनन् । त्यसका लागि अन्य धेरैकुरा सँगै आवश्यक हुन्छन् ।
५. सुरक्षित यौनसम्बन्धको भुमिकाः
यौन सम्बन्धमा सुरक्षाका उपायको पनि महत्वपूर्ण भुमिका छ । कतिपय मानिस कण्डोमको प्रयोग झन्झटिलो मात्र होइन सन्तुष्टीको बाधक नै भएको ठान्छन् । तर वास्तविकता त्यस्तो होइन । यौन सम्बन्ध बनाइरहँदा तपाइँ सुरक्षित महसुस् गर्नु हुन्छ भने कण्डोमको प्रयोगले सुन्तुष्टी घटाउँदैन बरु बढाउँछ । यौन सम्पर्क बनाइरहँदा हुन सक्ने गर्भधारण वा अन्य चिन्ता कण्डोम लगायतका साधनले घटाउँछन् जसको अर्थ आनन्द स्वतः बढ्छ ।
६. सेक्सका कुराः
कतिपय अवस्थामा आफूलाई प्रयोग गर्न मन लागेको आसन वा नयाँ तरिकाबारे भन्न नजान्ने हो भने सेक्स पार्टनर भड्किने मात्र होइन यौन जीवन नै विग्रन पनि सक्छ । तर यदि तपाइँलाई कुनै नयाँ तरिका अपनाएर सेक्स गर्न मन लागेको छ भने त्यसको बारेमा पार्टनरसँग खुलेर कुरा गर्नुस् ताकि यो प्रयोगमा उसको पनि स्वामित्व अनुभव होस् ।
७. के यौन सम्बन्धले आपसी प्रेम स्वतः बढाउँछ ?
यौन र प्रेम एकअर्काका परिपुरक जस्तै हुन् । अधिकाँश जोडीहरु यौन सम्बन्धले आपसी प्रेम पनि बढाएको अनुभव सुनाउँछन् । यद्यपी यौन सम्बन्धले मात्र आपसी प्रेम र सदभाव बढाउने भने होइन ।कतिपय अवस्थामा जोडीको एक अर्काप्रतिको नकारात्मक भाव, इगो लगायतका कुराबीचमा आइदिन्छन् । तर त्यसलाई पनि रचनात्मक ब्यवहार अपनाउन सक्यो भने सहजिकरण गर्न सकिन्छ ।कहिलेकाँही जोडीले एक आपसमा अंगालो मारेर लिने आनन्द यौन सम्बन्धले पनि नदिनपनि सक्छ । तसर्थ एक अर्कालाई यौनबाहेकको प्रेम पनि दर्शाउनुस् ।
८. चलचित्रमा देखाउने सेक्स र वास्तविक जीवनको सेक्सः
कतिपय मानिस जीवनमा हुने यौन सम्बन्ध पनि चलचित्र या उपन्यासमा देखाइको जस्तै हुने यौन कल्पना गर्छन् र जीवनमा पनि यौन त्यस्तै आदर्शपूर्ण हुने ठान्छन् ।,तर जव वास्तविक यौन जीवनमा प्रवेश गर्छन् उनीहरु निराश हुन्छन् । वास्तविक जीवनमा विभिन्न कुराहरु यौन क्रियाकलापमा अपेक्षकृत सन्तुष्टी नदिने कारक बन्न सक्छन् । यौन क्रियाकलाप गरिरहँदा सम्झिएको काम, तनाव, फोन, बच्चाको रुहाई लगायतका कुरा समेत यौनानन्दमा बाधक बन्न सक्छन् । तसर्थ वास्तविक जीवनको यौनलाई चलचित्रमा देखाइएको जस्तो पूर्ण र आदर्श कल्पना गर्नु हुँदैन ।
९. यौन सम्बन्ध यत्तिकै आनन्दपूर्ण बन्दैन
अधिकाँश मानिसहरु यौनलाई सधै उस्तै गरी बुझ्छन् । अर्थात सधै उसैगरी यौन ब्यवहार प्रदर्शन गर्छन् । तर सधै उस्तै तरिका अपनाउँदा यौनिक आनन्द घट्दै जान्छ । स्वस्थ यौन जीवनका लागि आफ्नो पार्टनरसँग खुलेर कुरा गर्नु, उसलाई के गर्दा सबैभन्दा बढी आनन्द आउँछ भनेर असहज नमानि सोध्नु र आनन्द आउने कुरालाई बढावा दिनु अत्यावश्यक हुन्छ । खासगरी पार्टनरलाई मनपर्ने क्रियाकलाप दोहो¥याएर गर्नु र नयाँ नयाँ यौनिक विधीहरुको प्रयोग पनि यौन जीवनमा अपरिहार्य हुन्छ ।
१०. दिमागमा सेक्सको कुरा मात्र खेल्छ ?
समस्या हुन सक्छः मानिसमा उमेर अनुसार अत्याधिक यौनिकता र कम यौनिकताको स्वतः प्रदर्शन हुन्छ । सेक्सको बारेमा सोंच आइरहनु एकदम स्वभाविक कुरा हो । सेक्स उर्जाको अर्कोरुप पनि भएका कारण सेक्सको विषयमा कल्पना गर्नु नराम्रो कुरा होइन ।
सेक्स सम्बन्धी सोंच घातक मानिदैन । तर तपाइँलाई सेक्सकोमात्र बिचार आइराख्छ अन्य विचारलाई पनि सेक्सको विचारले नै थिच्छ भने त्यसलाई चाँहि सामान्य मान्न मिल्दैन । यद्यपी जीवनभर यौनिक विचार भने प्रदान नै रहने भएका कारण यौनबारे सोंच्दा अपराध बोध गर्नु जरुरी छैन । साभार श्राेतः नेपाली हेडलाइन
कपिलवस्तु नगरपालिका- ३ द्धारा अपाङ्गता भएका र एकल महिलालाई न्यानो..
गएरातीको वर्षाले कपिलवस्तुमा तरकारी खेतीमा क्षति
कपिलवस्तुमा सिरिन्ज अभाव हुदाँ कोरोना विरुद्धको खोप अभियान ठप्प
पछिल्लो २४ घण्टामा १० हजार ३१९ जनामा कोरोना संक्रमण, ४..
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले भन्यो- सडकको लापरबाहीले गैँडा मर्‍यो
कपिलवस्तु नगरपालिका- ३ द्धारा अपाङ्गता भएका र एकल महिलालाई न्यानो सिरक
पछिल्लो २४ घण्टामा १० हजार ३१९ जनामा कोरोना संक्रमण, ४ जनाको मृत्यु